August 7, 2020 4790
केहिदिन अगाडिदेखि सामाजिक सञ्जालमा निकै’नै भा इरल भइरहेको कैलालीका अर्जु’न विक र ‘श्रीमती लक्ष्मीको बिहि’वार दिउँसो भेट भएको छ । उनिहरुले भेटमा एक अर्का’लाई आ रोप लगाउदै आइरहेका छन ।
अनामनगरको सडकमा छोराला’ई पिठ्युँमा बो’केर ठेला चलाइरहेका बेला अर्जुनको फोटो सञ्चारकर्मी सरु सुनारले आफ्नो क्याम’रामा कैद गरेर सञ्जालमा राखेकी थिइन् ।
तस्बिर सामाजिक सञ्जा’लमा छिनभरमै भा इर’ल भएपछि सडकमा उनको दुश्य खिच्न युट्युबरहरुको लर्को नै लागेको थियो ।
केही अन्तर्वाता सार्वज’निक भएसँगै वि’कलाई देश विदेश’बाट सहयोग पनि आउन थालेको छ । यति’बेला लक्ष्मी’ र अर्जुन आफ्नो घर कैलाली पुगेका छन । कैलालीमा लक्ष्मीले अर्जुन माथि केश हाले पछि अर्जुन त्यहाँ पुगेका हुन । सडकमा भेट भए पछि उनीहरु बीच बच्चा खोसा खोस भएको छ । भिडियो हेर्न’को लागि तल जानुहोला ।
यो पनि पढ्नुहोस्… भाग्य र शिशिरको विरोध गर्नेलाई रविको यस्तो जवाफ
केही दिन यता केयर बाल गृह की सञ्चा’लिका पुष्पा अधिकारीले एक बच्चाको नाटकीय उद्दा”र गरे पछि उनको विरोध भयो , त्यस्तै भाग्य न्यौपाने ले गरेको अन्तर्वतलाई कतिपयले आलोचना गरे , भने कतिपयले उनको समर्थन गरे ।
भाग्यको बिरोध गर्ने लाई रबि ला’मिछानेले जाजर’कोटबाट कडा जवाफ दिएका छन् । हेर्नुहोस् जस्ताको तस्तै:
समाजसेवा फेरी एक पटक विवा’दमा परेको छ । एक अनाथालय सञ्चलिकाली नाटकीय ढंगले नव’जात शिशु भेटाएको रा नक्कली उद्धार गरेको बारे प’ट लागे पछि सबैजना उनीमाथि रा उ’नको भिडियो बनाउने माथि खनिएका छन् ।
राष्ट्रिय मिडियाको आफ्नै दम्भ छ ,फुर्ती छ , युट्युव जस्ता माध्यमबाट चिनिएका पत्रकारहरुलाई मुलधारका पत्रकार हरू धारे हात लगाउँछन् , पत्रकार नै मान्दैनन् ,सञ्चार’कर्मी नै मान्दैनन् । कोही कोही त यो मान्छे नै मान्दैनन् । हो युटुबमा अतिरञ्ज ना छ । पैसा कमा’उने प्रतिश्पर्धा छ । घटना भन्दा टाइटल बिक्ने भन्दा टिक्ने खेलो छ ।
राम्रा र नराम्रा पक्ष कुन विधामा छैनन् ? मूलधारे मिडियाले कतिपय घटना र मान्छेलाई पटक्कै गन्दै’नन् तर जनतालाई सूचना त चाहिन्छ । मनोरञ्जन पनि चाहि’न्छ । मुलधारका मिडि’याले सूचना नदिए पछि आम मानिसहरू बाध्य भएर युट्युव लगाएतका मध्यहरुको भर पर्न विवस छन् ।
म अहिले जाजरकोटमा छु , जाजरकोटका दरबार पछाडि छ । यही सोटीमा नवराज लगा’एत का हरुको ह’त्या हुँदा आम मानिसलाई पल पल सूचना चाहि’एको थियो । मुलधारका मीडि’या कुर्ने धेर्य कसैलाई थिएन, त्यसैले सयौको संख्यामा आएका युट्युव चानेल हरू कै सूचनामा आम मानिस निर्भर भए ।
समाचार सम्प्रेषण मा परिपक्क नभएका नयाँ सञ्चार’कर्मीले स्वभावैले घटनालाई अति’रञ्जित बनाए त्यही कुरा मूल धारे मिडियाले पल पल मा अपडेट दिएको भए हुन्थ्यो तर त्यस्तो हुन सकेन र आफूलाई उपस्थित गराउन नसकेका मूलधारे मिडिया’हरुले युट्युव च्यानलका सन्चारकर्मीलाई सरपी मात्र रहे । मुलधारका मिडियाहरु अधिकांस राजनीतिक घटनालाई सम्प्रेषण गर्न बढी समय खर्च गर्छन् ।
जुन आम मानिसलाई फिटिक्कै मन पर्दैन । त्यसका विकल्पका रुपमा युट्युव च्यानल उदाए । त्यसमा आलोचना गर्नु पर्ने नै के छ र ? मन परेको च्यानल कतिले हेर्छन कतिले हेर्दैनन् ।कतिले मन पराउँछन् कतिले मन पराउँदैनन् , कसले कस्तो क’स्तो प्रतिक्रि’या दिन्छन् , यी सबै हेर्न पाउने प्ल्याटफोम नराम्रो त हुँदै होइन ।
तर किन हो किन मुलधारका सञ्चार कर्मीलाई युटुब र लाई फुटेको आँखाले पनि देख्न सक्दैनन् । चाहँदैनन् । म’लाई लाग्छ यो इर्ष्या हो दम्भ हो । कुण्ठा पनि हो ।
भर्खर प्रयोगमा आएका यस्ता माध्यम हरुलाई मुलधारका सञ्चार कर्मीलाई स्वीकार्नु पर्छ । आज अपरि’पक्क छन् भोलि परिपक्क हुन्छन् भोलिका लागि सूचना र मनोरञ्जनको लागि भरपर्दो माध्यम बन्दछन् जिम्बेवार बन्दछन् ।
भाग्य न्यौपानेलाई झण्डै २ मिलियन ले हेर्दा रहेछन् । कुनै मुलाधरेलाई मन नपरेर हुन्छ र ? जनताले मन पराएको मान्छेलाई चिन्दा पनि चिन्दीन हेर्दा पनि हेर्दिन भनेर ढोंग’ गरेर हुँदैन । एउ’टा दुइटा गल्ती सबैका हुन्छन । त्यत्रो मान्छेलाई सहयोग गरेर त्यत्रो मान्छेको प्रिय भएको मान्छेका विषयमा मूल धारले कहिल्यै नलेख्ने ।
कहिल्यै नबोल्ने । अनि जब उसको’ एउटा गल्ती हुन्छन् अनि १२ हात जति लामो आर्टिकल लेख्ने त ! भाग्य न्यौपा’ने पपुलर रहेछ भन्ने कुरा उसले एउटा गल्ती गर्दा मात्र थाहा भयो ?
उसले त्यत्रो फलोअर्स कसरी’ कमायो भन्ने बारे पनि सोच्नु पर्ला नि ! शिशिर भण्डारी किश्ण कडेल त्यसै लो’क प्रिय भएका होइनन् यिनीहरूले धेरैको जीवन बदलिदिएको पनि छन् ।
संसारका धेरै विद्यालय अस्पताल हरू सहयोग बाटै बनेका चलेका छन्। एउटा पुष्प अधिकारीले गल्ती गरेनन् भनेर समाज’सेवा नै गलत भन्ने तर्क सही होइन । अनुराधा कोइरा’ला पुष्पा बस्नेत ज’स्ता महान नारीहरु पनि अरूको सहयोगमा सत्कर्म गरिरहेका छन् ।
औंला उठाउन सजिलो छ काम गर्न गाह्रो छ । दिलशोभा श्रेष्ठले जस्तो अरुले फालेका त्यागेका बुढा बा आ’मा को दिसापिसाब सोहर्न सक्नुहुन्छ ? सायद आफ्नै बा आमाको पनि सक्नुहुन्न । कसैले सहयोगको राम्रो हिसाब किताब राख्न नजा’नेको हुन सक्दछन् । त्यसला’ई सचेत बनाउने हो । अनुगमन गर्ने निकाय ले कडाईका साथ अनुगमन गर्ने उस्तै परे कारबाही गर्ने ।
संगिता राना मगर , मेनुका थापा सुनिता दनुवार हरुले गरेको काम एक दिन मात्र पनि गर्न सकिँदैन । दीक्षा चापागा’ईं जस्तो बाटोमा किरा परेर लडेका मानिसह’रूलाई बोकेर ल्याएर नुहाई धुवाई गरेर दिशा पिसाब सोरेर दिनरात सेवा गर्ने जो कोहीको बसको कुरा होइन ।
दिल खोलेर सहयोग गर्नु र वालेट खोलेर सहयोग गर्नु आकाश जमिनको फरक छ । सामाजिक सञ्जालबाट सत्कारमा’ गरेका यी मानिस हरूलाई मानिसले त्यसै फलो गरेका होइनन् होला ।
हो पैसाका कुरामा पारदर्शिता चाहिन्छ । त्य’समा सबैजना सचेत हुनु पर्छ । आपत्तीजनक शैलीको लागि माफी माग्नुहोस् र सच्चिनु होस । सामाजिक सञ्जा’लमा लोकप्रिय हरूलाई मूलधारे सञ्चारकर्मीले सौतेनी व्यवहार गर्नु अनुचित हुन्छ ।
यहाँ कोही कसैको प्रतिस्पर्धी छैन , यो आ’काश यती विशाल छ की चराहरूले एक अ’र्कासंग ठोकिन्छ भन्ने पीर लिनै पर्दैन ।एउटा समुह छ जो आफैंलाई बौद्धिक घोषणा गर्न लागि परेको छ ।यहाँ ट्वीटरमा कमेन्ट गर्नेहरू स्टान्डर्डर मानिन्छन् । युटुबमा कमे’न्ट गर्ने चाई चेतना नभएका मानिन्छन् ।
आम नेपाली मानिसहरू जुन प्लेट फर्म मा छन् त्यही लोकप्रिय छ ।त्यसलाई दिल ‘खोलेर स्वीकार गर्नु पर्छ । जनताका मुद्दा आमा मानिसको घटना जसले देखाउँछ , आम ‘मान्छे त्यतै आकर्षित हुन्छन् । नयाँ पत्रीका दैनिक ले जन चासोको विषयमा ध्या’न दिन थाले पछि पछिल्लो दिनमा यसको लोक प्रियता कसरी बढेको छ । त्यो पनि भन्न छुताउँदिन ।
कसैले नमानेर नगनेर हुन्छ र । जनताले माने पछि सक्किगोनी । गल्ती गरे पछि मात्र चिन्ने होइन , राम्रो का’म गर्दा पनि चिन्ने गरौं । यत्रो आकासमा २-४ जना भाग्य न्यौपाने अटाउँछन् ।आबस्यकता भन्दा बढी निन्दा नगरौं । चन्द’लाई धन्दा चाई नबनाऔं । कानूनी दायरामा ल्याऊ, पारदर्शी बनाऔं । मूल कुरा चाई एकले अ’र्काको अस्तित्व लाई सहर्ष दिल खोलेर स्वीकार गरौं ।
अर्जुन विक संग सम्बन्धित भिडियो हेर्नुहोस्…
Prevभाग्य न्यौपानेको विरोध गर्नेलाई रबि लामिछानेले दिए यस्तो कडा जवाफ (भिडियो सहित)
Nextअर्जुन र लक्ष्मीबीच बाटोमै छोरो खोसाखोस, भयो यस्तो लफडा (भिडियो हेर्नुहोस्)
हेल्मेट माग्न जाँदा राष्ट्रिय अनु-सन्धान विभागका कर्मचारीको ह,त्या
खुशीको खबर – अब लाइसेन्स ट्रायलमा सामान्य गल्तीले फेल नहुने !